လက်မောင်းအရေပြားအောက်ထည့် သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်းနှင့်ထုတ်ခြင်း - intouchmedicare
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲး( Intouch Medicare )ဆေးခန်းသည်လက်မောင်းအောက်၌သန္ဓေတားဆေးပစ္စည်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သန္ဓေတားဆေးထုတ်ခြင်းကိုအထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးမှဆောင်ရွက်ပေးသည်ဖြစ်ပါသည်။ဒါဟာခဏသာအချိန်ကြာပြီး လုံခြုံသောကိုယ်၀န်တားနည်းဖြစ်ပါသည်၊အဆင်ပြေစွာနှင့်လျှင်မြန်စွာဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာနာကျင်ခြင်းလဲမရှိပါ။ထို့နောက် ကိုယ်ဝန်ကို ၃-၅ နှစ်အထိကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။နောက်ပြီးထုတ်ဖို့ရန်ကိုလဲမခက်ခဲပါ၊၎င်းသည်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါသည်။ သန္ဓေတားဆေးလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်သောအခါကလေးရရန်အခက်အခဲမရှိပေ။ ကလေးလိုချင်ရင်စိတ်သက်သာရာရနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သန္ဓေတားဆေးကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကဟော်မုန်းတွေကို ၁ လအတွင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်လို့ အဲ့တာကြောင့်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေမြင့်ပါသည်။
လက်မောင်းအောက်၌တားဆေးပစ္စည်းထည့်ခြင်းဆိုသည်မှာ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး မိမိကိုလုံခြုံစေနိုင်သောကိုယ်၀န်တားနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ရာသီလာချိန်၌ဗိုက်နာခြင်းကိုလဲလျော့နည်းစေပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ၃-၅နှစ်အထိကိုယ်၀န်တားနိုင်ပါသည်၊ဒီနည်းလမ်းသည် ကိုယ်၀န်တားတဲ့ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်၊အခြားသော တားန်ည်းထက်အရည်အသွေးမြင်းမားမှုရှိပါသည်။ကွန်ဒုံးဖြင့်ကာကွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ဆေးက်များသောက်ခြင်းသည်ဖြစ်စေ၊အရေးပေါ်တားဆေးသောက်ခြင်းများတို့ထက်ပိုပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားပါသည်။
လက်မောင်းအောက်၌တားဆေးထည့်ခြင်း (Contraceptive Implant)
လက်မောင်းအရေပြားအောက်ထည့် သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်း (Contraceptive Implant)
လက်မောင်းအရေပြားအောက်ထည့် သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်းဆိုသည်မှာသန္ဓေတားနည်း၏အလွန်ထိရောက်သောယာယီနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ ပရိုဂျက်စတဟေော်မုန်းပါ၀င်သော မီးခြစ်ဆံချောင်းအရွယ်ရှိ ပလတ်စတစ်‌ ချောင်းများဖြစ်ပါသည်။ လက်မောင်းအရေ ပြားအောက်သို့ ထည့်သွင်းထားပါက ကိုယ်၀န်ရရှိခြင်းကို ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ် အထိ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ သားအိမ်လည်တံအတွင်းရှိအချွဲကို ဆေးပျစ်စေခြင်း၊ သားဥအိမ်မှသားဥမကြွေစေရန် ဟန့်တားခြင်းဖြင့် ကိုယ်၀န်ရရှိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်း၏ကောင်းကျိုးများသည် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး လုပ်ရခြင်းအချိန်မြန်ပါသည်၊အနာမှာလဲချုပ်စရာမလိုပါအကြီးအကျယ်ခွဲစိတ်ရခြင်းမဟုတ်တဲ့တွက်ကြောင့်၊ဆေးကဒ်ကိုသောက်ရန်မကြာခဏမေ့တတ်တဲ့သူအတွက်သင့်တော်ပါသည်၊နောက်ပြီးအနာဂတ်မှာ ကလေးထပ်လိုချင်ရင်လဲ အလွယ်တကူရနိုင်ပါသည်။နို့တိုက်နေတဲ့မိခင်များလဲလုပ်နိုင်ပါသည် နို့ရည်အတွက်ထိရောက်ခြင်းမရှိပါ။
သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထုတ်ခြင်းသည်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါသည်၊အချိန်လဲမကြာပါ။ ထုတ်ခြင်းအတွက်သည် ထုတ်ချိန်တန်၍ သို့မဟုတ် ကလေးရှိဖို့ရန်အတွက်ထုတ်၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြီးထည့်ချင်ရင်လဲအဟောင်းကိုထုတ်ပြီး အသစ်ပြန်လှဲထည့်နိုင်ပါသည်။
ဆရာ၀န်ချိန်းသောရက်အရလာရမည် ၇ ရက် သားဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်သောအနာပေါ်စစ်‌ဆေးဖို့အတွက် အဲ့‌နောက်ပိုင်းတနှစ်တကြိမ်လာစစ်ဆေးပေးသင့်သည်
သတ်မှတ်ထားသောအချိန် ၃နှစ် သို့မဟုတ် ၅နှစ် ပြည့်လျှင် ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်နှင့် အသစ်ထပ်ထည့်‌ဖို့ရန်အတွက် ဆေးခန်းကိုထပ်ပြီးပြန်လာရမည်
အခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်ကိုယ်၀န်တားလိုသည်ဖြစ်စေ၊ကလေးယူဖို့သည်ဖြစ်စေ ၊သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထုတ်လိုလျှင် သို့မဟုတ် ထုတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီဖြစ်လျှင် ဆက်ပြီးမထည့်ချင်တော့ပါက မှန်ကန်သောအချက်အလက်အကြံရယူရန်ဆရာ၀န်ကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
မိနစ်နဲ့ချီပြီးအချိန်ခဏတည်းဖြင့်ပလတ်စတစ်ချောင်းကိုထုတ်နိုင်ပါသည်။ထုတ်ခြင်းသည် ထည့်တာထက်အချိန်အနည်းငယ်သာလျှင်ကြာပါမည်။ထုတ်နည်းသည်ထည့်တဲ့ချိန်နဲ့အနည်းငယ်ကွဲခြားပြီး ခပ်ဆင်ဆင်တူပါသည်။အောက်ပါအတိုင်းထုတ်နည်းများကိုဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းများမှာ-
မိမိအနာကို ရေမထိအောင် အနာပိတ်တဲ့ပလတ်စတာနဲ့ပိုးသတ်ထားသောပိတ်ကျဲပတ်တီး (Sterile Gauze) နဲ့ပိတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည
မကိုက်ခဲရင်ပုံမှန် ၅-၇ ရက်နောက်ပိုင်းအနာမှာကပ်ပေးထားသောပလတ်စတာကိုယူထုတ်နိုင်ပါသည်၊အကယ်၍အလွန်ကိုက်ခဲပြီးသွေးထွက်ပါကဆရာ၀န်ကိုချက်ချင်းလာပြရပါမည်
*ဒီနည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဆရာ၀န် သို့မဟုတ် သူနာပြုနဲ့သာလျှင်လုပ်ဆောင်ရပါမည် ၊မိမိကိုယ်တိုင်မလုပ်ဆောင်သင့်ပါ၊ မယူထုတ်သင့်ပါ ၊ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အင်ထပ်မီဒယ်ခဲဆေးခန်းမှာလုပ်တဲ့ဆေးအမျိုးအစားသည် Implanon ဖြစ်ပါသည်၊သူ့ရဲ့အရည်အသွေးကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပြီးလုံခြုံစေနိုင်ပါသည်။Side effect လဲမရှိပြီး လျင်မြန်စွာမနာကျင်ဘဲလုပ်နိုင်ပါသည်။
၅ နှစ်သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်း ဈေးနှုန်း 5,990 ဘတ်
၃ နှစ်သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထည့်ခြင်း ဈေးနှုန်း 5,490 ဘတ်
သား‌ဆက်ခြားပစ္စည်းထုတ်ခြင်း စတင်သောဈေးနှုန်း 2,300 ဘတ်
မှတ်ချက်။ ။ 1. ဈေးနှုန်းသည် ဆရာဝန်အားဖြင့် ဦးစွာအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်ပြီးတစ်ဉီးနှင့်တစ်ဉီးကွဲပြားသွားမည်။
2. ဒီနည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဆရာ၀န် သို့မဟုတ် သူနာပြုနဲ့သာလျှင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။မိမိကိုယ်တိုင်မလုပ်ဆောင်သင့်ပါ၊မယူထုတ်သင့်ပါ။